Isbitaalka Huashan ee kuxiran Jaamacadda Fudan - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Isbitaalka Huashan oo ku xiran Jaamacadda Fudan
Isbitaalka Huashan ee gacansaarka la leh Jaamacadda Fudan wuxuu ku yaal Shanghai, wuxuu ka kooban yahay aag ku dhow 50 mu. Waxaa la aasaasey sanadkii 1907. Waa heer sadexaad oo dhameystiran isbitaal isku dhafan daawo, baris iyo cilmi baaris ， iyo cutub cayiman oo caymis caafimaad oo ku yaal Shanghai.
Isbitaalku wuxuu leeyahay 10 farsamooyin muhiim ah: neurosurgery, qalliinka gacanta, Neurology, Epidemiology, Clinical Integrated Chinese Chinese iyo Western Medicine, Urology, Nephrology, Waaxda Wadnaha, Caafimaadka Sawirka iyo Nukliyeerka, iyo Qalliinka Guud. Lafaha, kalkaalinta, shaybaarka, shaybaarka muhiimka ah (qalliinka gacanta), shaybaarka muhiimka ah (antibiyootikada), endocrinology, neurosurgery, qalliinka gacanta, neerfaha, daawo dhaqameedka Shiinaha (cudurka sambabka), cudurka maqaarka, kaadi-mareenka, nephrology, qalliinka, caloosha, cudurka kansarka, infekshinka, daaweynta baxnaaninta, daawada isboortiga, imaging medical 20 takhasusyada muhiimka ah. Waxaa jira 7 xarumo caafimaad oo lagu xakameeyo tayada daaweynta farmashiyaha, neerfaha, maqaarka, daaweynta laser, daawada nukliyeerka, ogaanshaha cudurka shaqada iyo qalliinka neerfaha, 1 xarunta cilmi baarista iyo iskaashiga tababarka ee WHO, iyo ku dhowaad 20 laboratoriyo muhiim ah, machadyo cilmi baaris kala duwan iyo xarumo.
Isbitaalku wuxuu leeyahay 1216 sariirood oo la ansixiyay, oo ku qalabaysan qeexitaan sare PET / CT, 3.0la socodsiinta magnetic resonance, shucaaca qalliinka, mindida gamma, 256rowga CT, SPECT, DSA, nidaamka elektroonik sawir qaadista (EBIS), midabka Doppler ultrasound system, ammonia mind, mindi ultrasonic, X-mindi, shoog lithotripter, xawaare toosan iyo qalab kale oo caafimaad.
Bishii Sebtember 2020, Guddiga Xisbiga Dawladda Hoose ee Shanghai iyo Dawladda Hoose waxay go'aansadeen in lagu abaalmariyo cinwaanka "Kooxda Horumarsan ee Shanghai ee la dagaallanka Cudurka 'COVID-19'.